Tanzania Mutungamiri anogadza yakakura yekushanyazve yekumisikidza drive
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Tanzania Mutungamiri anogadza yakakura yekushanyazve yekumisikidza drive
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Mutungamiri weTanzania Samia Suluhu Hassan akatanga chirongwa chekushanyirwa icho chichafumura Tanzania musika musika wepasi rose wekushanya, wakanangana nekukwezva vashanyi vakawanda uye mari munyika.
Iyo ichangoburwa "Royal Tour" chirongwa chinyorwa ichanyorwa munzvimbo dzakasiyana muTanzania.
Parwendo, Mutungamiriri achabatana nevashanyi pachavo vozotora chikamu chekunyora rwendo rwekutumirwa kwepasirese uye kutenderera.
Kurekodhwa kwenyaya iyo inofanirwa kusimudzira Tanzania pasi rose yakatanga muna Nyamavhuvhu 28, 2021, muZanzibar uko Mutungamiriri parizvino ari kushanya zviri pamutemo.
Zvinyorwa zvekushanya zvichaverengerwa pasi paSachigaro wekomiti yeMutungamiriri wenyika anozoronga chirongwa chekusimudzira Tanzania pasi rese uye ari Secretary Permanent mu Ministry of Information, Culture, Arts and Sports.
"Mutungamiriri acharatidza vashanyi zvakasiyana zvekushanya, mari, hunyanzvi, uye tsika zvinokwezva muTanzania," inoverengwa chikamu chechirevo chakapihwa neHofisi yeMutungamiri weTanzania. Chirongwa cheRoyal Tours chakaitirwa kusimbisa hukama pakati peTanzania nedzimwe nyika, zvakare kukurudzira kushanya pamwe nekubatana kwekufamba pakati Tanzania, mamwe marudzi, nemasangano.
Mutungamiri Samia vakati hurumende yatangisa nzira dzine hukasha dzekushambadza nyika kuburikidza nekusimudzira mikana iripo yezvehupfumi pasi rose. Mushure mekutora hofisi yepamusoro muTanzania munaKurume gore rino, Mutungamiri Samia vakati hurumende yavo inotarisira kukwidza huwandu hwevashanyi kubva parizvino mamirioni 1.5 kusvika kumamiriyoni mashanu evashanyi mukati memakore mashanu anotevera.
Mumutsara mumwe chete, hurumende inotarisira kukwidza mari yevashanyi kubva pari zvino US $ 2.6 billion kusvika US $ 6 billion panguva imwecheteyo, akadaro. Kuti zvibudirire pazvinotarisirwa, hurumende yave kukwezva mari dzekumahotera nekushanya nekusiyana kwenzvimbo dzinoshanyirwa nevashanyi, kazhinji nzvimbo dzezvakaitika kare nemahombekombe egungwa, pakati pezvimwe nzvimbo zvisati zvanyatsogadziriswa kukwezva vashanyi.
Tanzania icharatidzawo nyika dzakarongeka kuti dzishambadze kushanya kwayo kuburikidza nemamishinari emamishinari uye mamishinari nekushambadzira kwehasha kwezvigadzirwa zvesafa pasirese. Kuongorora kwemitero inorambidzwa mukushanya, nechinangwa chekubvisa varimi kubva pamitero uye mutoro wemari inozotarisirwawo.
Musangano, mahombekombe, uye zvigadzirwa zvevashanyi venhaka, pamwe chete nezvikepe zvekufamba-famba ndidzo nzvimbo dzinogona kuvandudzwa uye kushambadzira kukwezva vashanyi vakawanda uye mari dzekufambisa - kunyanya mahotera, kutakura nendege, uye zvigadzirwa.
Kuvandudzwa kwenzvimbo nyowani mapaki muWestern Tanzania inotarisirwa kusimudzira kushanya munzvimbo yeGreat Lakes, inozivikanwa nembama nemagorila ari kufamba pakati peTanzania, Uganda, Rwanda, neDR Congo. Mapaki matsva anotarisirwa zvakare kusimudzira kushanya kwematunhu uye epakati pe Africa pakati peTanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, neDemocratic of Congo (DRC).
Tourism iri pakati penzvimbo dzakakosha dzehupfumi idzo nyika dzeAfrica dziri kutsvaga kusimudzira, kushambadza, nekusimudzira kubudirira kwenyika.
Mutungamiri Samia vakaita Kushanya kweHurumende kwemazuva maviri kuKenya muna Chivabvu gore rino, ndokuzoita hurukuro neMutungamiri weKenya VaUhuru Kenyatta, vachinongedzera kuvandudzwa kwekutengeserana nekufamba kwevanhu pakati penyika mbiri dzakavakidzana. Vakuru vaviri veHurumende vakabvumirana pamwe chete kubvisa zvipingaidzo zvinokanganisa kufamba zvakanaka kwekutengeserana nevanhu pakati penyika mbiri dzekuEast Africa vobva vakurudzira vashanyi vematunhu nevekunze kushanyira nyika imwe neimwe.
Vakazoraira avo vatungamiriri kuti vatange nekupedzisa hurukuro dzekutengesa kuti vadzivirire mutsauko wakakura pakati penyika mbiri. Kufamba kwevanhu kunosanganisira vashanyi vemuno, vematunhu, uye vekunze vanoshanyira Kenya, Tanzania, nedunhu rese reEast Africa.